MORAFENO – SAMBAVA : Tsara ny vokatra lavanila, tonga maro ireo olona mivarotra entana
Ankehitriny dia mbola maro ireo tanàna sokajiana ho saro-dalana sy lavitra eto Madagasikara, ka isan’izany ny tanànan’i Morafeno. Ity farany izay tanàna iray tafiditra ao amin’ny kaominin’i Bevondro, ao amin’ny faritr’i Bemarivo, distrikan’i Sambava. 25 octobre 2017
Marihina fa i Bemarivo dia renirano iray lehibe miainga avy ao Tsaratanàna, toerana misy ny tendrombohitra avo indrindra eto Madagasikara. Ka ny faritra rehetra nolalovan’ny reniranon’i Bemarivo dia nantsoina hoe faritr’i Bemarivo avokoa. Ny vokatra lavanila no mampalaza izany toerana izany. Farany teo dia 640 000 Ariary hatramin’ny 700 000 Ariary ny kilaon’ny lavanila masaka nandritra ny fotoanan’ny lavanila tany an-toerana.
Misy amin’ireo tokantrano no manana lavanila an-taoniny maro fa misy ihany koa ireo tsy mba manana izany. Izay fananan’i Morafeno vokatra tsara eo amin’ny sehatry ny lavanila izay no antony mahatonga ny olona avy any Bealanana sy ireo toeran-kafa mihazakazaka mankany an-toerana mba hanodina vola any. Tsy vitsy mantsy ireo olona mpiavy tonga any Morafeno no mitondra entam-barotra isankarazany maro. Isan’izany ny kidoro, « plaque solaire », fanaka sy ireo sisa hafa ihany koa izay mety ilain’ny mponina any ifotony. Avo roa na telo heny avokoa ny vidin-javatra tonga any an-toerana, izay tena tombom-barotra be tokoa ho an’ireo mpamarotra. Fantatra ihany koa fa 1 500 hatramin’ny 2 000 Ariary ny saran’ny vary iray kapoaka ao amin’ny tanànan’i Morafeno. Zary efa lasa fiainana mahazatra izany ka tsy misy mitaraina na tsy manaiky izany aza ny mponina.
Malalaka ny fivarotana zava-mahadomelina
Tsy mora ny ahatongavan’ireo entam-barotra any an-toerana ireo, tsy maintsy atao an-tsoroka na lolohavina avokoa. Dia an-togotra roa andro no tsy maintsy diavina raha miala avy any Andapa na Sambava, miampy iray andro amin’ny dia fiarakodia. Telo na efatr’andro an-tongotra kosa izany raha avy any amin’ny distrikan’i Bealanana. Izany elanelam-potoana izany dia manam-porofo fa anisany mbola toerana lavitr’ezaka ny tanànan’i Morafeno.
Mbola malalaka tokoa ny fivarotana zava-mahadomelina any amin’ity toerana ity, kanefa dia milamina ny tanàna ary mandry fahalemanana ny mponina noho ny dina izay napetraka. Fantatra ihany koa fa na dia miliara maro aza no mifamezivezy ao amin’ny faritr’i Bemarivo dia tsy mbola nisehoana asan-jiolahy na asa ratsy tao an-tanàna.
Ny loza mananontanona ny faritry Benarivo dia ny fihazakazaky ny fahapotehan’ny ala izay ambolena vary an-jatony hektara isan-taona. Ankoatr’izay dia alain’ireo mponina amin’ny fanaovana fanaka sy ny trano ihany koa ny hazo. Ny ankamaroan’ny trano any an-toerana rahateo dia saika vita amin’ny hazo avokoa.